Madaxweyne Deni oo iska fogeeyay inuu xidhiidh arrimaha doorashada ah kala dhexeeyo golaha midowga musharrixiinta | Somali Link Newspaper
Guriga Education Madaxweyne Deni oo iska fogeeyay inuu xidhiidh arrimaha doorashada ah kala dhexeeyo...
Madaxweyne Deni oo iska fogeeyay inuu xidhiidh arrimaha doorashada ah kala dhexeeyo golaha midowga musharrixiinta
Talaado, Maarso, 02, 2021 (HOL) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo wareysi siinayay Universal tv ayaa iska fogeeyay inuu la safan yahay golaha midowga musharrixiinta madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Deni waxa uu sheegay in aanu jirin wax xidhiidh ah oo arimaha doorashada quseeya oo kala dhexeeya musharrixinta, balse wuxuu caddeeyay in ay ka xun yihiin in laga hor istaago xuquuqda dastuuriga ah.
“Musharrixiinta anaga lama socono, mana taageerin, waa muwaadiniin qaarkood dalka soo xukumay, laakiin waxaan wax kasoo saarnay markii labadii madaxweyne ee dalka soo maray hotelkoodii lagu xabbadeeyay,” ayuu yiri Deni.
Deni wuxuu sheegay wada hadalka hadda u socda xukuumada federalka iyo golaha midowga musharrixiinta in ay yihiin waxyaabihii kasoo baxay qeylo dhaantoodii ku aadanayd in la saxo dhibaatadii dhacday 19 february.
Sida hadalka madaxweyne Deni laga fahmayo. Puntland dhibaato uma aragto in musharrixiinta aanay ka qeyb ahayn dhammaaan shirarkii dhexmaray dowladda federalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Article horeTwitch backtracks after outcry for using ‘gender neutral’ term ‘womxn’
Article soo socdaHogaamiyaha xisbiga Wadani “Wasiirka arrimaha dibadu ha is caliso”
Beesha caalamka oo bogaadisay wada hadallada Xukuumadda iyo Midowga Musharixiinta
Golaha midowga musharrixiinta oo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu ka fashilinayo wada hadalada u socda xukuumada iyo mucaaradka
Hogaamiyaha xisbiga Wadani “Wasiirka arrimaha dibadu ha is caliso”